Shaqaalaha warshadaha iyo mulkiileyaasha oo heshiis wado gaaray - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Marcus Ericsson/TT, Anders Wiklund / TT
Shaqaalaha warshadaha iyo mulkiileyaasha oo heshiis wado gaaray
La daabacay fredag 1 april 2016 kl 13.16
Iskaashatada shaqalaha warshadaha iyo ururka matala mulkiileyaasha ayaa gaaray heshiis hal sanno soconaya oo mushaarka u kordhinaya boqolkii 2,2 bil kasta 600 000 oo ka mid ah shaqaalaha ka howl-gala warshadaha.
Wada xaajoodka labada dhinac waqti ayuu soo jiitamayey iyadoo laysku mari waayey qorshoyaal kala duwan oo labada dhinac wateen.
Waxayse ugu dembeyn labada dhinac aqbaleen heshiis gaaban oo ku kooban hal sanno oo ay soo bandhigeen dhexdhexaadiyeyaasha labada dhinac. Heshiiskan ayaa ka micno ah in shaqaalaha warshadaha loo kordhiyo mushaarka 2,2 boqolkiiba bil kasta.
– Waa heshiis wanaagsan oo hal sanno soconaya, siinaya xubnaha ka midka ah iskaashatadeena fursad ay mushaarkooda ku kordhin karaan, sidaas waxaa yeri Anders Ferbe oo ah guddoomiyaha iskaashatada IF Metall.
Dhanka shaqaboxiyaasha heshiiskan ay ogalaadeen waa mid niyad jab ku ah. Haamigooda waxuu ahaa in heshiiska cusub uu xoojiyo awoodda tartan ee warshada Sweden, laakiin heshiiskan cusub ma ahan mid taas saamaxaya ayey qabaan.
– Heshiiskan waa mid qaali nagu ah, ayey tiri guddoomiyaha ururka warshadaaha cuntada sameeya Marie Söderqvist.
Maxuu heshiiskan dhallin karaa?
– Waxa dhacaya waxay tahay haddii sannad weliba mushaarooyinka kor u sii socdaan , markas tartakanka waa looga dheereynayaa warshada Sweden iyo alaabaaha ay soo saaraan, taas oo markas nagu qasbaysa in aan meelo kale oo mushaarka raqiis yahay u guurno, ayey tiri.